VaBiden Vari Kutsvaka Mitemo Inoomesera Vanoda Kutenga Pfuti
Mapurisa ari pamusuwo pechitoro chakaurayirwa vanhu gumi svondo rino
Paramende yeAmerica iri pakati penhaurirano pamusoro pemitemo inofanirwa kudzikwa kuti zvisaita nyore kutenga pfuti muAmerica.
Izvi zvinotevera kupfurwa nekufa kwevanhu gumi mune chimwe chitoro muguta reBoulder, mudunhu reColorado, neMuvhuro.
America ine mbiri yevanhu vane pfuti vanopinda muzvitoro, mudzimba dzinoratidzwa mafirimu, munzvimbo dzekudyira, muzvikoro, nemune dzimwe nzvimbo vachipfura vanhu madiro.
Asi mitemo yekuomesera vanhu vanoda kutenga pfuti iri kunetsa kuvhoterwa muparamende dzeAmerica.
Mumazuva manomwe kubva zvapfurwa vanhu vasere muguta reAtlanta nemusi weChipiri svondo rapera, pakaita dzimwe nzvimbo nomwe dzakapfurwa vanhu vazhinji.
Nzvimbo idzi dzinosanganisira Stockton, mudunhu re California, Gresham, mudunhu re Oregon, Dallas neHuston, mudunhu reTexas nemuguta rePhiladelphia, mudunhu re Pennsylvania.
Kongiresi irikuedza kunyora mitemo yekuomesa kutengwa kwe pfuti asi kusawirirana pakati penhengo dzeparamende kunokonesa kuti pabude mitemo inogona kushandiswa.
Pakutanga kwemwedzi uno, Kurume, dare reHouse of Representatives rakavhotera mabhiri maviri anopa mvumo yekuti hupenyu hwemunhu wese anoda kutenga pfuti hutange hwaferefetwa.
Kutadza kubvumirana pamusoro pe mitemo iyi kwave nemakore kuchiitika mushure mekupfurwa kwevanhu vakawanda asi pasina chinobuda.
Mazuva ayo VaBiden vaitsvaka rutsigiro, vakavimbisa kuti kana vakakunda musarudzo ye mutungamiri wenyika, vachashanda kuti kutengeswa kwepfuti kuiswe pasi pemitemo yakasimba kuti kupfurwa kwevanhu vasina mhosva kupere.Izvi ndizvo zvavari kuedza kuita.
Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paUniversity yeColorado, muBoulder, Muzvinafundo Cladius Mandoma, vanoti vanhu vezera rechidiki vari kuremerwa nezvinhu zvizhinji asi vachishaya rubatsiro nguva ichiripo. Vanoti vamwe vanosvika pakuita izvi vachida kuwonekwa uye kuti vazivikanwe.
Hurukuro naDoctor Cladius Mandoma